Fanazarantenan’ny Tafika « Tintôtry 2017 » : Narefotra avokoa ireo karazan-tafondro mavesatra -
AccueilRaharaham-pirenenaFanazarantenan’ny Tafika « Tintôtry 2017 » : Narefotra avokoa ireo karazan-tafondro mavesatra
Mafy ny fanazarantenan’ny Tafika malagasy nampitondraina ny anarana “Tintôtry 2017”. Fanazarantena izay nokarakarain’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN) nandritra ny herinandro izay niainga tany Anjozorobe sy Fenoarivobe ary nifarana, omaly, teny amin’ny seha-panaovana fanazarantena sy sarin’ady eny amin’ny tany miaramila eny Tampoketsa, izay manana velarana 11.740 Ha.
Araka izany, nasaina nanatrika ny famaranana ny sarin’ady sy fanazarantena teny Tampoketsa ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo olo-manan-kaja miaramila sy sivily, toa ny filohan’ny HCC, ny lehiben’ny Faritra Analamanga, sns.
Teo amin’io famaranana io no nanaovan’ny tafika malagasy ny fanazarantena sy sarin’ady amin’ny fitifirana fahavalo amin’ny alalan’ireo fitaovam-piadiana karazan-tafondro mavesatra, toa ny “DCA” na ny “Défense contre avion”, ny “Canon 122 mm”, ny “Orgue de Staline”, ny “Blindé”, ny “lance rocket anti-char”, ny “Dragonov”, ny “Canon sans récul”, ny “Mitrailleuse FM”, sns.
Araka izany, nizara ho roa miavaka tsara ny fanazarantena tamin’ireo fitaovam-piadiana mavesatra ireo. Ny tapany voalohany nanaovana ny tifitra tamin’ireo karazan-tafondro mavesatra ary ny tapany faharoa nampiasaina ireo “blindé” sy ny “lance rocket anti-char” ary ny “canon sans récul” sy ny “tireur d’élite”, sns. Nandritra ny ora telo teo ho eo kosa iny fanazarantena tamin’ny alalan’ny fitifirana tamin’ireo karazan-tafondro mavesatra ireo.
Marihina fa nahetsika avokoa tamin’iny fanazarantena iny ireo vondron-tafika rehetra misy eto Madagasikara afa-tsy ny Tafika an-dranomasina irery ihany. Izany hoe, nandray anjara tamin’iny fanazarantena iny ny Tafika an-tanety sy an’habakabaka niampy ny Corps de la Protéction Civile (CPC) na ny Hery fiarovana ny vahoaka.
Voalaza sy araka ny fanazavana, sambany no nisian’ny fanazarantena miaramila malagasy fotsiny tamin’iny indray mitoraka iny. Saika niarahana tamin’ireo miaramila vahiny hatrany mantsy ny fanazarantena hatramin’izay.
Raha ny mahakasika ny fitifirana tamin’ireo karazan-tafondro indray, 37 aty aoriana vao nisy toy iny teny Tampoketsa iny indray satria ny taona 1980 no nanaovan’ny Tafika malagasy izany farany. Ankoatra izay, amin’ny maha fanazarantena amin’ny fitifirana amin’ny alalan’ireo karazan-tafondro mavesatra ireo, nisy ny fepetra noraisin’ireo tompon’andraikitra amin’ny fametrahana ireo mpijery nasaina mba ho fiarovana azy ireo. Tamin’izany ihany koa no nampisehoana ny teknikan’ady rehetra sy fiarovana ary ny fomba fanavotana, sns. Voalaza ihany koa fa ny fitambaran’ny fitifirana sy ny fihetsika ao anatin’izany no manome ny fepetran’ny ady.
Marihina fa amin’ny rafitra Repoblikanina sy Demokratika ny firenena iray dia eo ambany fibaikoin’ny sivily ny miaramila.
Manan-jo manao fitafy miaramila ny Filoham-pirenena
Amin’ny maha Filoham-pirenena an’ i Hery Rajaonarimampinina dia filoha faratampon’ny foloalindahy ihany koa ny tenany, noho izany dia manana zo feno hitafy fiakanjo miaramila ny tenany fa kosa tsy misy mari- boninahitra eo antsorony. Samy taitra sy gaga ihany koa ny rehetra raha nahita ny filoham-pirenena tonga tao Antsiranana nitafy izany fiakanjo miaramila izany, ny antony dia avy nanatrika ilay fanazaran-tena ara tafika tao antampoketsa ny filoha ary nitody doha avy hatrany tany Antsiranana hanatrika ilay fankalazana ny faha 50 taonan’ny FJKM sy ny 200 taona nahatongavan’ ny misionera LMS teto Madagasikara.